Frank Lampard oo si cad u sheegay xiddig ay muhiim tahay inuu isaga tago kooxda Chelsea – Gool FM
(London) 29 Sebt 2020. Tababaraha reer England iyo kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ayaa aaminsan in ciyaaryahanka ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Ruben Loftus-Cheek uu leeyahay karti aad u weyn.
Balse tababare Frank Lampard ayaa sheegay in danta laacibkan 24 jirka ah laga yaabee ay ku jirto inuu ku baxo qaab amaah ah, sababa la xiriira in Blues ay joogaan xiddigo si wanaagsan ugu tartami kara booskiisa.
Dhaawac ka soo gaaray canqowga ayaa keenay in Ruben Loftus-Cheek uu ka qeyb galo kaliya sagaal kulan tartamada oo dhan oo uu la qaatay kooxda Chelsea xilli ciyaareedkii hore.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in kooxaha Aston Villa iyo West Ham United ay doonayeen inay la saxiixdaan Loftus-Cheek.
Halka tababare Frank Lampard uu sheegay in Ruben Loftus-Cheek ay muhiim u tahay inuu si joogta ah u ciyaaro, waxaana wareysi uu bixiyay ku sheegay:
“Aad ayaan ula socdaa Loftus-Cheek, waxaan wada hadalnay isbuucii la soo dhaafay, isagu waa diyaar”.
“Wuxuu ciyaari karaa toddobaad, kaddib haddana wuu maqnaanayaa Isbuuc kale, sidaas darteed wuxuu u baahan yahay inuu si joogta ah u ciyaaro”.
“Wuxuu sameeyay dadaal badan, wuuna horey u ciyaari karay kulamo badan haddii aan kubadda la joojin laheyn”.
“Waxaa macquul ah in Ruben Loftus-Cheek uu u baxo, si uu u ciyaaro kulamo badan, sababtoo ah waxaan qabaa inay taasi isagu u fiicnaan laheyd”.
“Waxaan u aragnaa inuu ka mid yahay ciyaartoyda wanaagsan, wuxuu doonayaa inuu ciyaaro, xaqiiqduna waxay tahay in tartan adag uu ka jiro boosaskan” ayuu yiri tababare Frank Lampard